आधा घन्टा जति चिकेपछि - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » आधा घन्टा जति चिकेपछि
भोलि पल्ट फोन आयो, केहि सामान्य भलाकुसारीको गफ भएपछि नेपाल कहिले आउनुहुन्छ त? भनेर सोधिन – सौभाग्यवश म पनि २ हप्ता पछि नेपाल फर्कदैं थिएँ। अनि एक्कासी “दाई जिन्दगीमा धेरै कुराको अनुभव भयो तर यो लभ गर्ने भन्ने कुराको अनुभव गर्न पाईएन। मलाई लभ गर्ने धोको छ” भनिन। त्यसपछि मैले कत्तिपनि विलम्ब नगरिकन “मेरोपनि त्यस्तै ईच्छा छ – त्यसैले म तिमिलाई लभ गर्ने प्रस्ताव राख्छु। प्लिज नाई नभन्नु है?” भनें त्यसपछि उनले तँपाई पछि उत्तर दिन्छु भनिन। अनि मैले भने मलाई अहिल्यै उत्तर चाहिन्छ भनें। त्यसपछि तुरून्तै उनले तँपाईको निवेदन स्विकृत भयो भनिन म यति खुशी भएँ कि त्यसको सिमा नै छैन। सानो बेला बास्तवमा दुवै जना एक अर्का प्रति आकर्षित हुँदाहुँदै पनि नजिक हुने अवसर प्राप्‍त भएको थिएन। एवं रितले मायाप्रीतिका कुराहरू हुँदै थियो अनि मैले म नेपाल आएको बेलामा काठमान्डौ आउनको लागि आग्रह गरें। उनले हुन्छ भनिन र म नेपाल पुग्ने वित्तिकै उनलाई फोन गरेँ। दशैं तिहारको बिचमा काठमान्डौ आउने कुरा निधो भयो। काठमान्डौ आएर २ दिन आफन्तीको घरमा बसे पछि पूर्णरुपमा १ रात हामी भेटघाट गर्ने कुरा भयो। यसै अनुरूप तिथि मिति निर्धारण भयो र सो दिन मलाई बिहानै खबर गरिन म पनि बडो उत्साह र उमंगका साथ भेटन गएँ। घरमा आज म साथीहरूसंग कार्यालयको बैठक लगाएतका कामकोलागि बाहिर हुन्छु भोलि आउँछु भनेर विदा लिएको थिएँ। बोलाएकै ठाउँमा भेट भएपछि हामी दुवैजना मोटरसाईकलमा न्यूरोडमा केही किनमेल गरि तोकिएको शहर भन्दा टाडाको मुकाम तर्फ अगाडी लाग्यौं – जुन मैले पहिल्यै मेरो अर्को मित्र मार्फत ब्यवस्था गरिसकेको थिएँ। दिनको करिब साँढे तीन बजे हामी पुगे पछि सामान्य दर्ता प्रक्रिया पुरा गरेर हामी कोठा तर्फ लाग्यौं।
एकछिन सामान्य भलाकुसारीका गफहरू चल्यो। कोठाको झ्यालका सबै पर्दाहरू लगाए पछि मैले आँखाको भाखाबाट अगाडी बढौं भनेर सोधेँ अनि उनलेपनि हुन्छ भनिन – अब के चाहियो र रेडि गेट-सेट गो ………………….. पुरानो चिनजान भएपनि यो खालको हरकत पहिलो थियो। म बेसरी आत्तिएको थिएँ। उनको कुर्ता, सुरूवाल र पेन्टी विस्तारै खोलिदिएँ उनीपनि पहिलो कार्यक्रम भएकोले निकै हतास र अप्ठ्यारो भएको महसूस हुन्थ्यो। तै पनि हामी एक अर्का प्रति मायामा पूर्णरुपमा समर्पित थियौं। हामी दुवै जना विवाहित भएकोले यो कार्यक्रम हाम्रोलागि नया थिएन। पहिलो लट हतार र हतासमा गरेकोले दुवै जना छिट्टै चरमोत्कर्समा पुगियो। मैले बाथरूमबाट धोएर फर्के पछि उनी नुहाउन गईन। एक छिन आराम गर्दै उहि पुराना गफहरू गर्न तर्फ लागियो। त्यसको डेढ घन्टा जति पछि फेरी मैले गर्ने तरखर गरें – उनि पहिल्यै मेक्सीमा थिईन कपडा खोल्न झंन्झट भएन। दोश्रो पटकको हाम्रो प्रयास निकै नै यादगार भयो दुवै जना नआत्तिकन निकैनै धैर्यतापुर्वक गरिरह्यौं – उनले म मेक्सीपनि खोलिदिन्छु अझै मजा आउँछ भनिन र त्योपनि खोलिदिईन। त्यसपछि उनेको ज्यानमा केहि पनि रहेन तर मेरो ज्यानमा भने जनै मात्र थियो। दुबै जनाले मच्चि मच्चि चिक्दा हामी करीब २० देखि २५ मिनट सम्म टिक्न सफल भयौं उनी भने अझै लाज मान्दै थिईन। सफा गरेर फर्केपछि खुशी हुँदै भोली विहान सम्म त हामीले ७ पटक गर्छौं कि क्या हो राजा भनिन। अनि मैले हामीले पाएको यो अवसर चुकाउन हुन्न सके जति गर्नुपर्छ – तिमीलाई मज्जा भयो? भनेर सोधे उनले आँखाको भाकाले सन्तुस्ठ भएको जनाईन्। साँझ पनि पर्न लागेको थियो, एकछिन बाहिर तिर घुम्न जाउँ भनेर बाहिर निस्केको उनको बुढाले फोन गरेर अलि शंका गरेको जस्तो गर्यो। बाहिर निस्के पनि खासै गफ गर्न पाईएन अनि फेरी होटल मै फर्क्यौं। रेष्टुरेन्टमा खाना खाएर फेरी आफ्नै रुममा गयौं। त्यस्तै रातीको १० बजेको हुदो हो मलाई फेरी चिक्ने ईच्छा लाग्यो। अब भने लाज र हतास सबै हराई सकेको थियो। पुरै कपडा खोलेर रातको मधुर प्रकाशमा धमाधम दे धडक पाराले दिन थालेँ ओ माई गड कति मजा भा’को यस पटक त झन उपद्रो पारा स्वाद लिई लिई चिक्न थाँले। खुब मजा भईरहेको थियो – धेरै बेर सम्म टिकेर गरें उनीले पनि पूर्णरूप सन्तुष्ठी पायको उनको अनुहारबाट प्रस्ट बुझ्न सकिन्थ्यो। यस्तै करिब करिब आधा घन्टा चिकेपछि मेरो माल झर्यो तर उनको अन्तिम डोज झर्न बाँकी रहेछ एक छिन नउठनु भनिन त्यसपछि तल बाटै कम्मर हल्लाईन यस्तै ८ – १० चोटी हल्लाएपछि बेसरी कक्रक्क हुने गरि मेरो ढाडमा दुवै हातले च्याप्प पारिन अनि मैले बुझें उनिपनि स्खलित भईन। एकै छिनपछि उनेको श्रीमानको फोन आयो – अलि शंका गरे जस्तो गरेका थिए तर जसोतसो कुरा मिलाईन। यसरी यस दिन हामीले ३ पटक गरेर सुत्यौं। अनि भोलि पल्ट विहान करीब ५ बजे तिर मलाई उठाईन र दुवैजनाले बाथरूमा गएर पिसाब फेरी सकेपछि मलाई गर्नु मनलाग्यो भनें। तँपाईकै त होनि सोधिरहन पर्छ र…….. खुरूखुरू गरे भईहाल्यो नि भनिन। मलाई राम्ररी अनुभव छ विहानि पखको चिकाई सार्है सन्तुस्टीदायक र आनन्दमयी हुन्छ। अनि कुनै विलम्व र हिचकिटाहट विना मेरो लाँडो उनेको पुतिमा हालेर मच्चिन थालें। यस्तै आधा घन्टा जति चिकेपछि मेरो माल झर्यो। यसपटक भने दुबैजनाको माल एकै पटक झर्‍यो। एकदम मज्जा भयो – मैले फेरी उसलाई सोधें तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेर? उनले पनि सार्है मज्जा भएको र अव कहिले भेट भएर यस्तो मज्जा लिन पाईने होला भनेर अलि चिन्तित भएको कुरा गरिन। मन हुन पर्छ जसरी पनि समय र सन्दर्भ मिलाउन सकिन्छ भनें। अलि चिन्तित भएर रुन खोज्दै थिईन मैलै राम्ररी संझाएर साथै स्नेहपूर्वक चुप्पा खाएर विचलित हुनदिईन। अनि हामी नुहाईधुवाई गरेर होटलको रेस्टुरेन्टमा गई विहानको खाजा खाएर शहर (काठमान्डौ) तर्फ फर्क्यौं। उनले हिजै देखि भन्दै थिईन मेरो पिरियड नजीकै आउँदै छ के हुने हो कुन्नि? बाटोमा आउँदा आउँदै उनी नछुनि भईछिन – हाम्रो भाग्य नै भन्नु पर्छ हामीले पहिलो पटकको सबै काम सम्पन्न गरेपछि यस्तो भयो। उनलाई मैले आफन्तीको घर भन्दा १०० मिटर वर नै छाडेर म आफ्नो घर तर्फ लागे।
यस पछि पनि हाम्रो फोनमा आज सम्म राम्रै संग मायाप्रीति र वार्तालापहरू चलिरहेकै छ। उपरोक्त घटनापछि पनि हामी फेरी एकपटक उनकै घर नजीकै को शहरमा माया साटासाट गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं यो घटनालाई अर्को पटक लिपिबध्द गर्नेछु।
chikeko katha, hotel ma chikeko katha, nepali bhalu chikeko, nepali chikeko katha, resturant ma chikeko katha, मच्चि मच्चि चिक्दा
आजकल बच्चे रोज स्कूल क्यों जाते है देख लो